Banyere anyị - Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.
A na -eji ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe kemịkalụ, injinịa, elektrọnik, nri, ọgwụgwọ, inye mmiri na ọrụ mgbapụta, ihe owuwu, ịgba ugbo, achịcha mmiri n'oké osimiri, nkwukọrịta ọkụ eletrik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
IHE ANYỊ NA -EME
Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. bụ onye nrụpụta ama ama ama ama na teknụzụ extrusion nke ngwaahịa plastik dị elu na China. Anyị na -enye mpempe akwụkwọ PVC, mpempe akwụkwọ PP, mpempe akwụkwọ HDPE, mkpanaka PVC, ọkpọkọ PVC, ọkpọkọ HDPE, ọkpọkọ PP, profaịlụ PP, mkpanaka mkpuchi PVC na mkpanaka ịgbado ọkụ PP maka ngwa dị iche iche.
Kemgbe etinyere na 1997 Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. ewepụtala ọdịbendị nke ngwaahịa na mmepe ọrụ na -aga n'ihu, n'oge na -adịghịkwa anya, ọ ghọrọ ụlọ ọrụ ama ama mba ụwa. Anyị na -aga n'ihu na -emepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu nke mba ọzọ ma ruo ugbu a anyị nwere ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ 20 dị elu, akụrụngwa 35 maka ọkpọkọ na ngwaahịa plastik ndị ọzọ. The ụlọ ọrụ na -ekpuchi ebe nke 230000 square mita, na kwa afọ mmepụta karịrị 80000 tọn. Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ depụtara ma mee ụkpụrụ mba maka ngwaahịa mpempe akwụkwọ plastik.
A na -atụle ogo ngwaahịa na ọrụ anyị dabere na ụkpụrụ na ntuziaka mba na mba. Ewezuga ime nyocha zuru oke n'ime ụlọ, anyị enwetala ọtụtụ asambodo mpụga, dịka. anyị ewerela ISO9001 International Quality Management Accredication maka ịdị mma. Na 2003 ọ nwetara asambodo ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, wee gafere asambodo maka nnwere onwe ngwaahịa na nyocha onyunyo dị mma na 2007. Anyị nwetara asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi ISO14001 na 2008.
Anyị ewepụtala ụgbụ ahịa zuru ụwa ọnụ, nke ndị ahịa na-akwado ebighi ebi na nkwalite ngwaahịa na usoro na-aga n'ihu. Ka ọ dị ugbu a, ebupụla ngwaahịa a n'ihe karịrị mba iri atọ, dịka America, England, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand na ndị ọzọ. Anyị nwetara ezigbo nlele site n'aka ndị ahịa anyị niile site na ikike ngwaahịa dị elu, ọnụ ahịa ọkacha mmasị na ọrụ ebe niile.
Na -akwado Ụlọ ọrụ Lida Plastic Co., LTD., Mgbe niile were "ọrụ awa 24, ọrụ dị elu, ọrụ usoro dum, ọrụ ogologo ndụ niile" dịka ebumnuche ọrụ anyị, na "kwesịrị tinye onye ahias'chọrọ, nweta nke ndị ahịa'obi ike site na ha afọ ojuju "dị ka echiche ọrụ anyị, na -agbaso ịdị mma na -agba mbọ maka nlanarị, ịrụ ọrụ na mmepe, ọrụ maka aha ọma. Anyịkwe nkwa ngwaahịa a mma n'ime oge akwụkwọ ikike, ọ bụrụ na ngwaahịa nwere nsogbu nsogbu, anyị ga ndozi, nnọchi ma ọ bụ nloghachi laghachi na -enweghị ntụpọ.
Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. na-agba mbọ ịnye ndị ahịa anyị ihe karịrị naanị ngwaahịa dị mma, yana ịnye ọtụtụ ọrụ agbakwunyere gụnyere nkwado teknụzụ na nzaghachi oge maka mkpa ndị ahịa anyị kwa ụbọchị. Anyị na gị na -arụkọ ọrụ kwa ụbọchị ka anyị ghara imezu atụmanya gị kachasị elu, kama iji nyere gị aka na -erigbu ahịa ọhụrụ mgbe niile. Biko kpọtụrụ anyị ka ị mụtakwuo maka Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.